lundi, 20 mai 2019 21:33
Robert F. Smith: Nefainy ny trosan’ny mpianatry ny oniversiten’i Morehouse any Atlanta, mitentina 40 tapitrisa dolara
Mainty hoditra, mpanefoefo any Etazonia i Robert F. Smith. Fanomezana natolony ireo mpianatra andihany 2019 miisa 400 vao nahavita fianarana ka nandray diplaoma, omaly alahady, ny nanambarany fa hoefainy avokoa ny trosan’ireo mpianatry ny oniversiten’i Morehouse any Atlanta ireo, izay mitentina 40 tapitrisa dolara na 35 tapitrisa euros.
Horakora-pafaliana no nandraisan’ny mpianatra izany, sady nandray diplaoma no afa-trosa.
Any Amerika dia mitrosa vola be tokoa ireo mpianatra hanefana ny saram-pianarana rehetra.
lundi, 20 mai 2019 21:13
Kylian Mbappé: Mpilalao mendrika ny « Ligy 1 » frantsay ny taom-pilalaovana 2018-2019
32 ny isan’ny baolina tafiditr’i Kylian Mbappé nandritra ny taom-pilalaovana 2018-2019 niadiana ny tompondakan’i Frantsa « Ligy 1 » amin’ny baolina kitra, izay nanosorana azy ho mpilalao mendrika.
20 taona izao Kylian Mbappé. Voahosotra ho « Meilleur espoir » na mpilalao tanora misongadina ihany koa izy, nandimby an’i Neymar.
Isan’ireo 23 lahy nandrafitra ny ekipam-pirenena frantsay nandrombaka ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra natao tany Rosia tamin’ny 2018 ihany koa i Kylian Mbappé.
lundi, 20 mai 2019 20:34
CENI: Fanaovan-tsonia teo amin'ny Japon sy Madagasikara
Notontosaina teny amin'ny CENI Alarobia io maraina io ny fanaovan-tsonia teo amin'ny firenena Japoney sy Madagasikara mahakasika ny fanolorana fitaovana ho entina miasa amin'ny fifidianana ho avy izao.
lundi, 20 mai 2019 19:53
Fanarahan-dalàna: Miainga avy any ambony ny ohatra
Fanarahan-dalàna: Miainga avy any ambony ny ohatra.
lundi, 20 mai 2019 19:43
Sambava: « Tsy mbola nahazo baiko ny hanolorana ny miaramila ny tenako », hoy ny lehiben’ny Tafika 711 Amborinala
« Momba ny ahiahy nipetraka aty aminay miaramila tamin'ny fanafihana mitam-basy tao Tsararivotra Sambava ny alin’ny 28 Aprily 2019, izay niafara tamin'ny fahafatesan’ilay mpikirakira lavanila dia misy antony vitsivitsy », hoy ny Komandan’ny toby miaramila voakasik’izany.
« Voalohany, saropady aminay Tafika raha ny lehibenay tsy mbola nahazo tatitra ny zava-misy aty, fa tsy maintsy miandry baiko avy any amin'ny isam-baratongany na hanaiky na tsia ny hanolorana ny miaramilako eny amin'ny Zandary mpanao famotorana ».
lundi, 20 mai 2019 19:36
Toamasina: Miditra anaty biraom-panjakana ireo mpangalatra
Fahasahiana tsy roa aman-tany ny nataon’ireo mpangalatra. Ny Zoma 17 mey 2019, tokony tamin’ny 12 ora sy sasany atoandro teo ho eo, nidiran’izy ireo tao amin’ny Ivo-toeram-pahasalaman’ny reny sy ny zaza na Centre de Santé de la Mère et Infantile (CSMI) ao amin’ny Hopitaly Kely Toamasina.
Norobain’ireo olondratsy ny vola sy kara-panondrom-pirenena ary kojakoja samihafa. Nisokafana ary nakorontan’ny mpanao ratsy ny antotan-taratasy tao anaty arimoara.
Nohararaotin’ireo olon-dratsy ny fotoana nandehanan’ny mpiasa tao amin’ny « cafétéria » izay toeram-pisakafoanana akaiky eo ihany. Very ny entan'ny mpiasa tao anaty birao rehefa niverina avy nisakafo izy ireo.
lundi, 20 mai 2019 19:32
Ambohijanaka-Merimandroso: Lasan'ny dahalo ny ombin'ny iray tanàna
Lasibatry ny asan-jiolahy mitam-basy tao Ambohipoloalina Ambohijanaka, Kaominina Merimandroso, Distrika Ambohidratrimo, tanàna 8 km miala an'i Ivato.
Dahalo 15 lahy manao tee-shirt, izay tamin'ny propagandy filoham-pirenena ny ankamaroany sady mitondra kalaky, hoy ny fanamarihan'ny mponina no nanafika ny alahady 19 mey tamin'ny 8ora alina.
Lasan'izy ireo ny omby iray tanàna, 20 eo. Ranomaso sy alahelo ary horohoro ny an'ireo tompon'omby mandry andriran'antsy amin'ny tsy fandriampahalemana.
Efa dila alavitra ireo dahalo tamin'ny fotoana nahatongavan'ny Zandary nantsoina.
Noroahan'ireo dahalo nianavaratra niazo ny Kaominina Ambato sy Manjakavaradrano ireo omby.
lundi, 20 mai 2019 19:21
Mgr Jean Claude Randrianarisoa: 12 taona androany no nanamasinana azy ho Evekan'i Miarinarivo
Ny 15 febroary 2007 no nanendren'i Papa Benoît XVI azy ho Eveka hitantana ny Diosezin'i Miarinarivo.
Ny 20 mey 2007 no natao ny fanamasinana an'i Mgr Jean Claude Randrianarisoa ho Eveka.
lundi, 20 mai 2019 15:42
Armée: Arrivée du 2è Helico
Le 2è hélicoptère est arrivé cet après-midi, Il est enregistré en Hélicoptère civile en Afrique du Sud, immatriculation ZS HRK, avec l'étendard de l'Armée Malagasy, il peut embarquer plus de personne que le premier hélicoptère arrivé il y a deux semaines.
lundi, 20 mai 2019 14:55
Tafika Malagasy: Tonga ny helikoptera faharoa
Helikoptera karazany Bell 412, lehibebe sy mahazaka olona maromaro noho ilay tonga voalohany ity faharoa ity, izay natao fandraisana eny Ivato androany tolakandro.
Efa nasiana mari-pamantarana ny Tafika Malagasy ilay helikoptera na mbola mitondra ny laharana atsy Afrika Atsimo (ZS HRK) aza.